Gbasara Anyị | Anping County Kaixuan igwe anaghị agba nchara Products Co., Ltd.
KX Co. (Anping KaiXuan anaghị agba nchara ngwaahịa co., Ltd.) e guzobere na 2002.
Ugbu a ụlọ ọrụ integrates imewe mmepe n'ichepụta nhazi na ahịa ọrụ, ọkachamara na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara valves, anwụrụ oyiyi akwa, pịa oyiyi akwa, na dị iche iche pụrụ iche omenala oge ọgbụgba.
Nnwere Onwe & Innovation
Ngwa Nnyocha Ọkachamara
Onwero ya na ngwa ihe eji enyocha ihe -spectrometer.
A ga-anwale ihe akụrụngwa tupu nkedo na mgbe ọ gbasịrị iji mee ka ọnụego 100% ruru eru wee zute ụkpụrụ ihe ndị ahịa chọrọ.
Ndị a bụ usoro 35 nke CNC igwe lathes, 2 na-etinye igwe na-arụ ọrụ, ihe na-eme ka ihe nkuku na-arụ ọrụ, igwe na-ezukọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ. Anyị na-eji ihe eji eri eri OSG Japanese ika na JBO European ika iji nwalee eri iji zute ihe ndị ahịa chọrọ.
Ọkachamara QC otu ga-anwale akụkụ ọ bụla, ọgwụgwọ elu, ntụpọ nke ihe nkedo na ihe ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-eme ka ndị ọkachamara na-egbutu ma na-egweri ndị ọrụ, ihe nyocha nke ndị ọkachamara nwere ezigbo njikwa na nrụgide mmiri na nchọpụta ikuku n'oge nchọpụta ngwaahịa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere usoro nchekwa gburugburu ebe obibi na usoro mbupụ.
Site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, Alibaba, Facebook, Linkedin, Google, na ọwa ndị ọzọ, bụ netwọkụ ahịa siri ike.
Taa, anyị na ngwaahịa na-eresị Japan, Europe, America, wdg 21 mba na mpaghara gburugburu ụwa.
Ọ na-e ọtụtụ-eji na 16 ọrụ na-akpụ a ọma ọrụ aha.
Anyị factory ekpuchi ebe ndị 20000 square mita.
Nkedo ogbako nke 5000 square mita.
Machining ogbako nke 5000 square mita.
Ngwa nyocha ndị ọkachamara, ndị ọrụ aka ọrụ nwere ahụmahụ, nkwado nkwado siri ike, KX (KaiXuan), nhọrọ gị dị mma.